Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Shirkadda South African Airways ayaa ku dhawaaqday in ay yeelaneyso Ku -meelgaar sare oo cusub
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Simon Newton-Smith ayaa loo magacaabay Fulinta Ku-meelgaarka ah ee cusub ee SAA: Ganacsi
Simon Newton-Smith ayaa hore xilal hoggaamineed oo muhiim ah uga soo qabtay Virgin Atlantic Airways iyo Qatar Airways.
Simon Newton-Smith ayaa loo magacaabay Fulinta Ku-meelgaarka ah ee cusub ee SAA: Ganacsi.
Simon Newton-Smith wuxuu ku biirayaa kooxda fulinta SAA ee Johannesburg.
Simon Newton-Smith waa khabiir ku xeel dheer duulista hawada oo leh rikoodh caalami ah.
Shirkadda South African Airways (SAA) waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo magacaabista ruug caddaaga warshadaha diyaaradaha, Mr. Simon Newton-Smith, oo ah jagada Fulinta Ku-meelgaarka ah ee SAA: Ganacsi.
Simon wuxuu ku biirayaa kooxda hoggaanka fulinta ee South African Airways oo ku sugan Johannesburg, Koonfur Afrika oo leh duulimaad ballaadhan oo caalami ah oo uu hore ugu biiray SAA sannadkii 2000 wuxuuna noqday madaxweyne ku -xigeenka, Iibka Waqooyiga Ameerika, halkaas oo uu hoggaaminayay iibinta, taageerada ganacsiga, kooxda iyo qiimaynta waaxyaha. Waxa kale oo uu qabtay jagada hoggaamineed ee ugu muhiimsan Virgin Atlantic Airways oo ah Madaxweyne Ku -xigeenka, Iibka Waqooyiga Ameerika iyo Maareeyaha Waddanka ee Koonfur Afrika, iyo Qatar Airways Doha oo ah Madaxweyne -ku -xigeenka Sare, Istaraatiijiyadda Ganacsiga.
South African Airways'Maamulaha Ku -meelgaarka ah, Thomas Kgokolo, wuxuu ku sifeeyay Simon inuu yahay xirfadle duulimaad oo khibrad leh oo leh rikoodh caalami ah oo wadista dakhliga faa'iidada leh iyo ku daridda qiimaha macmiilka ee tartan, adag oo si dhaqso leh u kobcaya. Simon wuxuu sidoo kale si weyn ugu darayaa xoogga kooxdeena fulinta ee kala duwan oo khibrad sare leh - kuwaas oo dhammaantood hadda la diyaariyey diyaarna u ah inay horay u qaadaan SAA. Wuxuu u keenayaa waayo -aragnimo aad u fara badan oo faa'iido weyn u leh SAA iyo macaamiisheena iyo la -hawlgalayaasha ganacsiga safarka adduunka oo dhan.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku biiro SAA maaddaama ay billaabeyso baal cusub oo ku saabsan taariikhda duulimaadyada Koonfur Afrika. Kani waa gaadiidleh leh hodan iyo masayr adduunka oo dhan aniga iyo kooxda fulinta waxaan si hagar la’aan ah uga shaqayn doonnaa dadaalladeenna ku aaddan soo dhaweynta rakaabka, kobcinta dakhliga iyo bixinta macaashka, ”ayuu yiri Mr Newton-Smith.
Waxyaabaha ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara ...
La -hawlgalayaasha Golaha Warshadaha Dhacdooyinka leh Xeerka ...
Israel waxay ka mamnuuceysaa shacabka aan tallaalin dhammaan dadweynaha ...
Daryeelka Caafimaadka ee Aan Xuduudda Lahayn iyo Kuuggii Bobby Chinn Oo Soo Baxay ...
Volocopter Chengdu: Diyaaradaha cusub ee Jarmalka iyo Shiinaha ...